Islam in Burma | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Posts Tagged ‘Islam in Burma’
Tags:Asia, Aung San Suu Kyi, Buddhism, Burma, Islam in Burma, Maung, Muslim, Myanmar
The interview on the issue of the order to denude 200-year-old historic Lin Zin Gone Muslim Cemetery
Oct 6, 2013 M-Media Reproted by Thuta Maung Maung
On Sept 17, 2013, the Clean Department of Mandalay Municipal Committee officially sent an order letter to Lin Zin Gone Muslim Cemetery Administrative Committee to remove the cemetery by their own arrangement not later than Oct 17. Hence, for information about the matter, M-Media contacted U Khin Maung Soe,amember of the cemetery administrative committee, for an interview.
Tags:Arlington National Cemetery, Cemetery, Death, Islam, Islam in Burma, Jennifer Lynch, Mandalay, Muslim
Beware of Hypocrite, coward and selfish Malaysian reporter from USA paper
Beware of Hypocrite, coward and selfish Malaysian reporter from USA paper which wrote the INCORRECT news aboutafake “Muslim Leader”.
She called me, e-mailed me, called my brothers and friends in Myanmar numerous times. We all are brave and risk our lives and face the danger to give information to her.
But I was surprised when she was angrily demanding, shouting with loud voice when I ask her permission to publish NOT HER NAME BUT the parent paper’s name inasecret FB group limited to about 50 people to ask about the information she wish to know about Wirathu and Dimond Shwe Kyi.
She raised her voice to protect her identity as she was said to be the only one reporter in Malaysia and not to put her employer organization’s name. She said it is dangerous. Then why working asareporter and risking us, my friends, my family, my brothers and Myanmar Muslims from various Religious Organizations.
Tags:Asia, Burma, Islam in Burma, Malaysia, Myanmar, United States, USA, Wirathu
Thank You friend and fellow Luyechun Vice-President Dr Sai Mauk Kham for the generous donations for the damaged Lashio Masjid
SORRY FOR THE WRONG NEWS. After all Sai Mauk Kham is not so generous not notabigot nor notasycophant puppet of Myanmar Military dictators. I have shared the correcting news below the false news. I have heard that he had even uttered the Anti-Muslim and Anti-Rohingya remarks last month.
အမှန်တရား စကား ပေါ် တွင် အသင်တို့ခါးသီး ကြမည်လော ?
လားရှိုး ဗလီကို ပြန်ပြင်ဖို့ငွေ သိန်း ၂၀၀ ပေးပြီး ဗလီ ပြန်ဖွင့် ခွင့် ကို ပေးတဲ့ ဒု- သမ္မတ က ရှမ်း လူမျိုး ။ဗမာ လူမျိုး မဟုတ်ဘူး ။ဗမာ လူမျိုး စစ်ခွေးမုဒိမ်းကောင် တိုင်းမှုး နဲ့ မြို့ ခံ ဗမာ တွေ က ကန့် ကွက်တယ်။
ဒု-သမ္မတ သာ ဗမာ လူမျိုး ဆိုရင် ဒါမျိုး ခွင့်ပြု မှာ မဟုတ်ဘူး ။ဟုတ်လား ။ရှင်း တယ်။ ရခိုင်မှ အပ ကျန်တိုင်းရင်းသား တွေဟာ ငဲ့ညာ သနားမှု ။ကိုယ်ချင်းစာမှု ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။
Thank You, friend and fellow Luyechun Vice-President Dr Sai Mauk Kham for the generous donations for the damaged Lashio Masjid. He was one year junior to me in IMM or now changed name to MMU. He donated Kyat 20 million for the repair of the Masjid and permit to reopen.
Myanmar Muslim Mediaဒုသမ္မတ လားရှိုးဗလီသို့ ကျပ်သိန်းတစ်ရာလှုသည့် သတင်းမှားယွင်း
စက်တင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၃
ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက လားရှိုးဗလီဝတ်ကျောင်းတော်အတွက် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ လှုဒါန်းသည်ဆိုသည့် သတင်းဖဘ စာမျက်နှာများတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် သတင်းမှာ မှန်ကန်ခြင်းမရှိကြောင်း မြို့ခံမွတ်စလင်မ်မြို့မိမြို့ဖတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာတင်အောင် က မြန်မာမွတ်စလင်မ်မီဒီယာမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တစ်ရပ်တွင်ဖြေကြားလုိုက်သည်။
နိင်ငံတော်အစီအစဉ်နဲ့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေ သွားတယ်၊ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အတွက် လာတယ်။မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ တွေ့တာမျိုးတို့၊လက်ခံစကားပြောတာမျိုးတို့၊အကူအညီ ပေးတာမျိုးတို့ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး”ပာု ဒေါက်တာ တင်အောင်က မြန်မာမွတ်စလင်မ်မီဒီယာသို့ပြောသည်။
ဒုသမ္မတဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းသည် လားရှိုးမြို့ခံများနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းမှုးတို့ ကန့်ကွက်သည့်ကြားမှ ပျက်စီးခဲ့သည့် လားရှိုးဗလီ ၀တ်ကျောင်းတော်ကြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ကျပ်သိန်းတစ်ရာနှင့်အတူ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း၊အဆိုပါခွင့်ပြုမိန့်ကို ဒေါက်တာတင်အောင်က တောင်းခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပာူသော သတင်းမှားတစ်ရပ်မှာ ဖဘ စာမျက်နှာများတွင်ပျံ့နှံ့နေခဲ့သည်။
ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တခြားဘာသာဝင်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုကသော်လည်းကောင်း၊အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းတစ
ငွေရေးကြေးရေးလှုဒါန်းတာတို့ မရှိပါဘူး”ပာုလည်း ဖဘ စာမျက်နှာများထက်တွင်ကောလပာလ ပျံ့နှံ့နေသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အထက်ပါ ပုဂ္ဂိ်ုလ်ကပင်ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
လားရှိုး ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို ယခုအချိန်အထိ အကြီးစားပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသေးဘဲ မီးရှို့ခံခဲ့ရသည့် နံရံများအတွက်သာ ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုသာပြုလုပ်ထားသဖြင့် ပမာဏများပြားသည့် အလှုငွေလည်း လိုအပ်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗလီဆောက်ရန် အလှုငွေပေးအပ်ခဲ့သည်ဆိုသည့် သတင်းမှားပျံ့နှံ့ခဲ့ဖူးသည်။
လားရှိုးဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကိုဘာသာရေးအစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက်သမားအချို့က ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ထိုသို့မီးရှို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည့် လားရှိုးဗလီဝတ်ကျောင်းတော်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၈ ရက်နေ့ရောက်မှ သာ ဒေသအာဏာပိုင်များက ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ဝတ်ပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။
Tags:Asia, Burma, Islam in Burma, Myanmar, Naypyidaw, Sai Mauk Kham, United States, Vice President of the United States
Dear Nan letter No 3
Compassionate letter : Third letter for Dear Nan, with love
Compassionate letter 3:
Third letter for Dear Nan, with love
With my Pseudonym, Bo Aung Din in Burma Digest and in San Oo Aung blog
“today’s human rights violations are the causes of tomorrow’s conflicts”
“… today’s human rights violations are the causes of tomorrow’s conflicts.” by Mary Robinson, High Commissioner for Human Rights (1997-2002)
We all should follow the wise and compassionate advice of our true Buddhist monk in accordance to the true teaching of Lord Buddha, which I copied from the Feb 21, 2006 (DVB) English news, because I am sure that Intra-Myanmar Internet access to all the opposition web sites are blocked.
Tags:Buddhism, Buddhist, Burma, Human rights, Islam in Burma, Karen Human Rights Group, Muslim, Myanmar
Tags:Asia, Burma, Iran, Islam in Burma, Islamic Republic News Agency, Muslim, Myanmar, Thein Sein
Tags:Burma, Islam, Islam in Burma, Malaysia, Muslim, Myanmar, Rohingya, Rohingya people